प्रजातान्त्रिक विचार समाजमा देवीप्रसाद – Chitwan Post
गैँडाकोट । लोकतन्त्रवादीहरुको बुद्धिजीवी संगठन प्रजातन्त्रिक विचार समाज चितवनको नवाँै अधिवेशनले डा. देवीप्रसाद कँडेलको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
गँैडाकोटको द नारायणी रिसोर्टमा शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले कँडेललाई सर्वसम्मत नेतृत्व दिएको हो । नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा भीमनारायण उपाध्याय, सचिवमा सुरेशचन्द्र आचार्य, सहसचिवमा सुरक्षा रेग्मी सापकोटा र कोषाध्यक्षमा शिवप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका छन् ।
समितिको सदस्यमा निर्वाचित हुनेहरुमा जनकराज घिमिरे, नारायणबाबु श्रेष्ठ, गोपाल पौडेल, गंगाप्रसाद चापागाई, सुनिता सडौला, गोविन्दबहादुर हमाल, सुरेशबाबु ढकाल, विकास पौडेल र जानकी पौडेल रहेका छन् । समितिका निर्वतमान अध्यक्ष समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समाजका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशन उद्घाटन समारोहको प्रमुख अतिथि कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी रहेका थिए । कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।